Fiaramanidina: ampahan'ny olana COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Fiaramanidina: ampahan'ny olana COVID-19
Aviation • Vaovao • Safety • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Namaky 22 aho
Hatramin'ny nanombohan'ny Covid-19, olona maro no nijanona tsy nanidina intsony! Nahoana? Ny antony dia marobe sy be pitsiny. Ny fitsangatsanganana an-tsena dia nidina noho ny Zoom sy ireo safidy fivoriana lavitra hafa. Ny fetra iraisam-pirenena momba ny pasipaoro amerikanina dia nahatonga ny fitsangatsanganana an-tsokosoko, ary ny fandrakofana amin'ny haino aman-jery 24/7 ny virus sy ny fiparitahany dia naharesy lahatra anay fa ny fomba tokana hijanonana ho salama sy velona dia ny mijanona ao an-trano, manao sarontava, ary halaviran'ny fiaraha-monina ny tenantsika avy amin'ny olon-drehetra. Ho an'ireo izay manapa-kevitra ny hitandrina amin'ny rivotra ary handeha amin'ny alàlan'ny rivotra amin'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina mankany amin'ny faritra hafa amin'ny planeta, dia mety hiatrika ny fahatezeran'ny mpitondra politika, ny mpitsabo ary ny media izy ireo, maminavina ny fisamborana COVID-19 sy ny fampitana azy. amin'ny namana, fianakaviana ary mpandeha hafa.
Mpandeha fiaramanidina. Mpanjifa tsy faly
Nitaraina momba ny kaompaniam-pitaterana an-taonany maro ny mpandeha. Ny fahasosoran'izy ireo dia mifantoka amin'ny toerana voafetra, seza natao ho an'ny preschoolers, tsakitsaky izay manome kaloria tsy misy, ary rivotra voaverina. Na dia manidina amin'ny sehatry ny fandraharahana aza ianao, ny sidina fiaramanidina avy amin'ny teboka A ka hatramin'ny B dia anisan'ny endrika tsy dia tsara indrindra amin'ny traikefa amin'ny dia. Mpandeha maro izay nihevitra ny fiaramanidina ho lovia Petri ho an'ny viriosy sy ny olana ara-pahasalamana / fahasalamana hafa ankehitriny izay resy lahatra fa ny manidina dia ao amin'ny sokajy No No; tsy izao, angamba any aoriana.
Talohan'ny nisongadinan'ny COVID-19 teo amin'ny sehatra manerantany dia novinavinaina ho taona tsara ho an'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina ny 2020. Ny Fikambanana Iraisam-pirenena ho an'ny fitaterana an'habakabaka (IATA) dia naminavina ny fitomboana 4.1 isan-jato amin'ny fivezivezena an'habakabaka eran-tany sy ny tombony azo aorinan'ny hetra amerikana avaratra $ 16.5 miliara ho an'ny 2019. Ny mpivarotra sy ny mpanome serivisy rehetra ao amin'ny hotely, fitsangatsanganana sy fizahan-tany faly ny indostria.
Avy eo dia tonga ny areti-mandringana ary nivadika ho any anaty sy ambony ambany ny vinavina. Ny faminaniana vaovao dia nanambara ny fahombiazana ara-bola ratsy indrindra teo amin'ny tantaran'ny fiaramanidina ara-barotra miaraka amin'ny tondro ara-toekarena izay manondro ny fihenan'ny mpandeha iraisam-pirenena maherin'ny roa tapitrisa amin'ny telovolana faharoa amin'ny 2020 ary ny fihenan'ny mpandeha mihoatra ny 4.5 miliara mandritra ny taona. Ny fanidiana ny seranam-piaramanidina any Eropa dia vinavinaina hahatratra isa tsy mampino miaraka amin'ny 193 amin'ny 740 tsy afaka mijanona ho velona satria nametrahan'ny governemanta ny quarantine sy ny famerana toeram-pialofana ho an'ny olom-pirenena sy ny mpitsidika.
Betsaka ny fomba ahitan'ny mpandeha fiaramanidina tratran'ny COVID-19 (na virus) ary ampidirina ao anaty sidina, mandritra ny famindrana / mialoha sidina mialoha na sidina tsy fantatra alohan'ny sidina. Ny fe-potoana fampidirana rano ho an'ny COVID-19 dia mety ho fohy roa andro - mampitombo ny fahafaha-mampiditra amin'ny sidina / seranam-piaramanidina.
Ny fanaraha-maso haingana dia afaka mametra ny fanaparitahana; na izany aza, mila fiaraha-miasa amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka izany. Ny mpahay siansa dia mitaky kopian'ny fisehoan'ny sidina, ny antsipiriany momba ny fifandraisana ary ny fanaraha-maso bebe kokoa ny hetsika anisan'izany ny fampitana vaovao. Mampalahelo fa mety tsy ampy ny antsipirian'ny fifandraisana ary misy ny seranam-piaramanidina sasany tsy te-hiara-miasa.
Manidina loza mitatao amin'ny fahasalamana ny manidina
Ny manidina dia heverina ho mampidi-doza amin'ny fotoana tsara indrindra. Fantatry ny mpandeha fa voahitsakitsaka ny tranony. Na dia mahazaka tsindry aza ny ankamaroan'ny olona salama, dia mety hampidi-doza ny fandinihana ny olon-dehibe manana toe-piainana ambany. Ny fikarohana dia namantatra ireo olana mety hitranga matetika mifandraika amin'ny aretin'ny tendrombohitra mahery (havizanana, aretin'andoha, maivana ary maloiloy) izay miakatra miaraka amin'ny fitomboan'ny haavony. Rehefa kivy ny tranom-baravarana noho ny fahamaroan'ny fotoana sidina, ny oksizenina mihena dia mety hampitombo ny toe-pahasalamana ao anatin'izany ny fahaketrahana amin'ny taovam-pisefoana. Ny tsindry ambany kabine amin'ny haavon'ny fivezivezena dia mety hiteraka famoahana kibo sy ratra amin'ny sofina. Ny fomba fandidiana farany vao haingana dia mitera-doza amin'ireo mpandeha amin'ny fanitarana entona ao anatin'izany ny perforation ny tsinay sy ny vaky ratra na ny fisarahana. Ireo mpandeha izay mitsoroka antsitrika dia manana risika bebe kokoa amin'ny famoizana aotomobilina raha manidina haingana be rehefa avy misitrika. Misy fiatraikany amin'ny fitaovam-pitsaboana ihany koa ny fanitarana gazy, ao anatin'izany ny fiparitahan'ny pnemika, ny fantsom-pisakafoanana ary ny catheter urinary.
Ny rà mandriaka (Immobilization) dia nampifandraisina tamin'ny 75 isan-jaton'ny trangam-pandrenesana rivotra misy tromboembolisme mahery vaika miaraka amin'ny matetika fipetrahana tsy misy lalantsara izay mazàna mivezivezy ny mpandeha. Ny taratra kosmika dia avy any ivelan'ny tontolon'ny masoandro sy avy amin'ny potika navoaka nandritra ny haintrano. Ny haavon'ny taratra dia miova mandritra ny taona mifototra amin'ny tsingerin'ny masoandro, ary koa ny haavon'ny haavony, ny halavirana ary ny halavan'ny fihenan-tsasatra. Ny karazana homamiadana isan-karazany dia mety misy ifandraisany amin'ny taratra cosmic (izany hoe: homamiadan'ny nono, homamiadan'ny hoditra ary melanoma) amin'ny ekipa mpandeha sy mpandeha an'habakabaka matetika.
Ny mpikarakara ny sidina dia manana fihenan'ny bronchitis mitombo 3 heny na dia ambany aza ny haavon'ny fifohana sigara; ny aretim-po amin'ny mpikarakara ny sidina vehivavy dia avo heny 3.5 heny noho ny besinimaro. Ny mpiasan'ny fiaramanidina dia nitatitra ihany koa fa 2-5.7 heny noho ny torimaso torimaso, ny fahaketrahana ary ny havizanana noho ny ankamaroan'ny mponina. Notaterin'izy ireo koa ny 34 isan-jato ny homamiadan'ny fiterahana. Arakaraky ny halavan'ny lalan'ny asa miaraka amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka no mahabe ny fitomboan'ny fahaverezan'ny fihainoana, ny fahaketrahana sy ny tebiteby.
Talohan'ny COVID-19 mpandeha 1 lavitrisa mahery no nanao dia isan-taona ary 50 tapitrisa mahery no nankany amin'ny faritra an-tany hafa. Notaterina, (saingy sarotra ny manoratra ny maha-marina ny angon-drakitra), dia ireo loza ateraky ny fifindran'ny aretina mandritra ny dia an-dranomasina arahin'antoka; na izany aza, mampitombo ny fahatsiarovan-tena amin'ireo loza ireo ny areti-mifindra. Miaraka amin'ny fahamaroan'ny olona mandeha sy amin'ny fitaterana an-habakabaka no mampitombo ny fomba fitaterany, vao mainka miharatsy ny fahafahan'ny fifindran'ny aretina amin'ireo mpandeha sy ny ekipa mandritra ny sidina ary koa aloha sy aorian'ny sidina.
Hatramin'ny 1946 dia misy porofo momba ny fihanaky ny areti-mifindra mahery vaika eny amin'ny seranam-piaramanidina ara-barotra, toy ny gripa, kitrotro, aretin'ny taovam-pisefoana mahery vaika (SARS), tuberkulose, fanapoizinana ara-tsakafo, enteritis virosy, ary cacar. Ny loza ateraky ny areti-mifindra amin'ny areti-mifindra dia voafetra ihany amin'ny olona manana fifandraisana akaiky na mipetraka ao anatin'ny laharana roa amin'ny mpandeha index.
Inoana fa tamin'ny sidina Air China nandritra ny 3 ora 112 (martsa 2003), mpandeha sy ekipa 22 no voan'ny aretin'ny taovam-pisefoana mahery vaika avy tamin'ny mpandeha iray, nanaparitaka ny SARS hatrany Mongolia sy Thailandy anatiny. Ny valanaretina SARS tamin'ny 2002-03 dia nanondro fa ny fitsangatsanganana an'habakabaka ara-barotra dia misy fiantraikany amin'ny fihanaky ny areti-mifindra.
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO) dia nanombatombana fa mpandeha 65 isaky ny iray tapitrisa izay nandeha fiaramanidina ara-barotra avy tany amin'ny faritra nampitana ny fivezivezena nandritra ny fipoahan'ny valan'aretina dia hita soritr'aretin'ny (angamba) SARS. Amin'ny ankapobeny, sidina 40 no nitondra tranga 37 mety ho loharanom-baovao SARS CoV nandritra ny valan'aretina, ka nahatonga ny tranganà tranga ambaratonga faharoa miisa 29.
Ny fandalinana sidina any Azia sy Eoropa dia nahita tranga izay niheveran'ny mpahay siansa fa niparitaka tamin'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina ara-barotra ny viriosy, ao anatin'izany ny iray izay nisaron-tava ny mpandeha N95 (CDC Journal). Ny tompon'andraikitra misahana ny fahasalamam-bahoaka any Angletera dia nandidy mpandeha sy ekipa efa ho 200 tao anaty quarantine roa herinandro taorian'ny nahitana fa olona fito izay nankany Wales avy any amin'ny nosy Zante (25 aogositra 2020) no voan'ny virus tamin'io sidina io. Raha ny tatitra nataon'ny BBC dia "maimaimpoana ho an'ny rehetra" ny fiakaran'ny fiaramanidina, ary tsy nampiharina ny lalàna momba ny saron-tavan'ireo mpandeha.
Hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana, mpanatrika sidina amerikanina 100 eo ho eo no nanaporofo tsara ny COVID-19. Na dia mety latsaky ny iray isan-jaton'ny mpanamory fiaramanidina 25,000 ao amin'ny American Airlines aza ity, noho ny politikan'ny orinasa, ny mpiasa dia tsy sahy mizara vaovao momba ny isan'ny mpiasa voan'ny virus.
Ny Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny Delta, Ed Bastian dia nitatitra mpiasa 500 teo ho eo izay nanandrana ny tsara ho an'ny COVID-19 ka nahitana ny maro an'isa; folo anefa no maty.
Ny mpanamory fiaramanidina iray dia nitatitra fa tamin'ny alàlan'ny serasera talen'ny hafatra dia nahafantatra mpanamory fiaramanidina telo sy mpanamory enina izay manana na mety manana COVID-19 izy.
Nandritra io fahavaratra lasa (2020) io dia nisy valan'aretina 59 noho ny aretina coronavirus nipoitra tamin'ny tranga 13 nifandray tamina sidina fito ora 17 isan-jato nankany Irlandy. Ny tahan'ny fanafihana mifandraika amin'ny sidina dia 9.8-17.8 isan-jato. Nisy fiatraikany 46 tamin'ireo tranga tsy sidina, manerana ny firenena ny fielezana. Ny fandefasana Asymptomatika / mialoha ny soritr'aretina amin'ny sidina avy amin'ny loharano teboka dia voan'ny 99 isan-jaton'ny virus mifandraika amin'ny fiaviana iraisana (eurourveillance.org).
Tsy ny sidina rehetra no foronina mitovy
Tsy ny fiaramanidina rehetra no foronina mitovy. Any amin'ny firenena misy ririnina na isaky ny mangatsiaka ny toetrandro (toy ny Siberia), ny mari-pana amin'ny kabine dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny fanodinana bokotra ao anaty vala. Ireo firenena miorina eo akaikin'ny ekoatera sy ny toetr'andro tropikaly (izany hoe Filipina) dia azo ovaina ny maripana manaraka io fomba io ihany.
Na dia rivotra aza ny tranon'ny fiaramanidina mandritra ny sidina, ny rivotra dia mivezivezy ao anaty tontolo mihidy, mampiseho ny mpandeha sy ny ekipa amin'ny karazan-javatra isan-karazany ao anatin'izany ny hypoxia hypobaric (ny fahafahan'ny vatana mamindra ny oksizenina avy amin'ny havokavoka mankany amin'ny lalan-drà); hamandoana maina (ny fahatsapana fa tsy ampy rano mampitombo ny mety harary) ary, ny olana lehibe ankehitriny, ny akaiky ny mpandeha hafa. Ny kabine dia fehezin'ny rafitra tontolo iainana izay mifehy ny faneriterena, ny mari-pana, ny rivotra ary ny sivana amin'ny rivotra; na izany aza, ny isan'ireo fonosin'ny rivotra miasa, ny mari-pana ao amin'ny faritra, ny fifangaroan'ny rivotra madio sy miverimberina aterina any an-tranony dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny sidina fandosirana.
Zava-dehibe ny manamarika fa tsy ny fiaramanidina rehetra no manana rafitra fanamafisam-peo. Ny fiaramanidina manana haavon'ny haavo farany ambony voafetra hatrany amin'ny 10,000 15,000 - XNUMX ft. Dia tsy natao miaraka amina rafitra fanamafisam-peo satria ny habetsan'ny oksizenina amin'ity haavo ity dia ampy hipokaan'ny olona salama. Amin'ny fiaramanidina lehibe kokoa, miaraka amin'ny fitomboan'ny fahaizan'ny mpandeha, ary natao hisidina amin'ny toerana avo kokoa, ny rafitra fanamafisam-peo dia ahafahan'ny mpandeha sy ny ekipa miaina ara-dalàna.
Ny kisary momba ny fikorianan'ny rivotra manerana ny tranony izay mampiseho ny fahombiazan'ny sivana HEPA amin'ny fivezivezin'ny rivotra dia tsy maneho ny fikorontanan'ny rivotra mikorontana na mijanona izay matetika miseho amin'ny mpandeha sy / na ny valizy manakana ny valizy amin'ny gorodona na ny valizy / ny fantsom-baravarana misokatra.
Rehefa mijanona eo amin'ny terminal dia misy rivotra madio omena ireo fiaramanidina mpanampy ary mety tsy ho velona ny sivana HEPA. Mandritra ny sidina, ny rivotra madio dia omena ny kabine avy ao amin'ireo motera misy hafanana, voafintina, ampangatsiahana ary ampidirina ao anaty tranony mba hiparitahan'ny rafitry ny rivotra. Ny rivotra ivelany dia heverina ho tsy misy ilana azy amin'ny haavon'ny fitsangantsanganana mahazatra. Ny lamina mivezivezy eny ambonin'ny fiaramanidina ara-barotra mahazatra dia mifanila amin'ny rivotra miditra ao anaty trano avy eo ambony, mivezivezy manerana ny fiaramanidina ary mivoaka ny trano kely akaikin'ny gorodona. Misy onjam-peo kely eo alohany. Ny lamina mivezivezy amin'ny rivotra dia mizara ny fikorianan'ny rivotra ho faritra ao anaty trano, mametra ny fiparitahan'ny poti-drivotra manerana ny tranon'ny mpandeha.
Ny fikarohana dia nanapa-kevitra fa ny fiaramanidina dia manana fifanakalozana rivotra avo kokoa noho ny ankamaroan'ny toerana anatiny; na izany aza, ny vongan-tsofina kely dia mety hiparitaka amin'ny toerana tery tery. Ny torolàlana momba ny dia an'ny Center for Disease Control (CDC) dia mahita fa ny fitsangatsanganana isan-karazany dia mampitombo ny fahafaha-mahazo sy / na hampielezana ny COVID-19.
Nanapa-kevitra ny mpahay siansa fa ny toerana ipetrahanao amin'ny fiaramanidina dia mety hisy fiantraikany amin'ny mety hisian'ny virus. Ny fandinihana dia nahitana fa tamin'ireo mpandeha 35 nipetraka tamin'ny laharana 9-13, ireo andalana teo alohan'ilay mpandeha voa - 11 no nifandray tamin'ny virus SARS nandritra ny sidina. Tsy nitovy tamin'n'ireo mpandeha 81 nipetraka tany amin'ny toeran-kafa tao anaty fiaramanidina izany. Famaranana? Raha mipetraka any aoriana ianao, lavitra eo alohany, na eo akaikin'ny mpandeha voan'ny aretina mihitsy aza, dia ambany kokoa noho izany ny loza ateraky ny viriosy noho ny sendra mipetraka eo alohan'ilay olona voa ianao.
Madio toy inona no madio
Talohan'ny areti-mandringana, ny fanadiovana ny atin'ny fiaramanidina dia nofinofy fotsiny fa tsy zava-misy. Ny tena hevitra hamonoana ny sandry, hanadio ny fitoeram-bilia, hanadio ny lavarangana, hanasa ny paosin'ny seza, hamafana ny bokotra mpiantso, na handroaka ny seza sy ny lalantsara dia tao amin'ny lisitry ny To-Do, saingy tsy dia nampiharina. Ny antony tsy firaharahana ireo protokol fanadiovana / fanadiovana? Ny fandaharam-potoanan'ny fiaramanidina dia niantso ny "fanadiovana lalina" isaky ny herinandro fahenina na aorian'ny mpandeha efa-polo alina dia nanana fotoana niainana, mikohaka, nikasika ary nibitsibitsika tao anaty fiaramanidina, teo amin'ny seza no nipetrahanao.
Ny Delta Airlines dia niara-niasa tamin'i Colleen Costello, mpiara-manorina sy tale jeneralin'ny Vyv (Vital Vio) hametraka ny jiro antimicrobial Non-UV misy patanty ao anaty lavaka fitondra-drano ao amin'ny Delta's 757. Ny rafitra Vyv, miaraka amin'ny fitondrana fanadiovana nentim-paharazana, dia mampihena ny bakteria ambonimbony ka miteraka fanandramana fidiovana madio kokoa ho an'ny mpandeha sy ny mpiasa. Ny mpitsangatsangana dia hahita an'i Vyv amin'ny sambo fiaramanidina Delta 757-200, napetraka eo ambonin'ireo fantsakana avo lenta sy latabatra ao anaty lavaka fidiovana.
Raha ny voalazan'i Costello dia TSY fahazavana UV i Vyv! Ny teknolojia Vyv dia mampiato ny fitomboan'ny bakteria, ny holatra, ny bobongolo ary ny ahitra, mamorona tontolo mahafaty ho an'ny mikraoba. Mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena ny jiro amin'ny fampiasana mitohy sy tsy misy fetra manodidina ny olombelona, ​​ny biby ary ny zavamaniry satria ny molekiola dia mikendry molekiola manokana misy bakteria, bobongolo, masirasira ary holatra… tsy ao amin'ny selan'olombelona.
Nambaran'i Costello fa, "Ny jiron'i Vyv dia manana fikirakira tsy manam-petra… tsy misy fetra ny toerana hametrahana an'ity haitao ity… Amin'ny taona 2021, Delta sy Vyv dia hanombatombana ireo fotoana mety hanitarana ao anatin'ny andian-tsambony sy ny seranam-piaramanidina hafa".
Araka ny news.delta.com, hanohy hanakana ny seza afovoany ny orinasa hatramin'ny Janoary 2021, mikasa ny hanova ny sivana rivotra HEPA matetika kokoa noho ny naroso ary izy no kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amerikana voalohany nametraka onjam-panadio tanana.
JetBlue dia mifantoka amin'ny fahasalaman'ny mpiasany amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpiasa Northwell Direct izay manolotra torohevitra momba ny fitsaboana any Long Island City. Ny programa dia natao hamantarana ny COVID-19 ao amin'ny mpiasan'izy ireo ary manolotra rohy mivantana amin'ny serivisy fitsaboana mba hahitana sy hanohanana raha toa ka mizaha toetra ny mpiasa. Amin'ny alàlan'ny programa Northwell Health Solutions JetBlue dia azo tohanana amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana ao an-trano amin'ny alàlan'ny programa tele-med ary raha ilaina dia ampidiro ao amin'ny serivisy ho an'ny fiara mpamonjy voina any Northwell. Natomboka tamin'ny Oktobra 2020 ny fiaraha-miasa ary mpiasa sahabo ho 1000 no nandray anjara tamin'ny fandaharana.
Notaterina (nz.news.yahoo.com) fa ny American Airlines dia nanisy otrikaretina otrikaina vaovao ho an'ny famboleny izay voalaza fa mamono COVID-19 eny amin'ny habakabaka mandritra ny 7 andro aorian'ny fampiharana azy. Nankatoavin'ny masoivoho amerikana fiarovana ny tontolo iainana vao haingana ho an'ny fampiasana vonjy maika, ny vokatra, fantatra amin'ny anarana hoe SurfaceWise2 (novokarin'ny Allied BioScience) dia ampiharina amin'ny fiaramanidina amin'ny alàlan'ny dingan'ny famafazana elektrostatika rehefa mandeha ny bisikileta amin'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina Dallas-Fort Worth.
AirAsia dia miaro ny ekipany an-tsambo miaraka amin'ny fanamiana PPE vaovao izay mitovy amin'ny jumpsuits HAZMAT.
Ireo ekipa mpiasan'ny kabine ao amin'ny Philippine Airlines dia miaro ampinga sy akanjo miloko fotsy mitafy aingam-panahy amin'ny tsipika avana mba hiarovana amin'ny COVID-19. Ny akanjo dia noforonin'i Edwin Tan, mpamorona ao an-toerana izay nampiasa fitaovana tsy misy poria ho an'ny PPE.
Avelao amin'ny alika izany
Angamba ny fomba tsara indrindra hahitana sy hitoka-monina ireo mpandeha COVID-19 dia ny fampiasana alika mpangarom-paosy izay naterina tany Helsinki, Failandy. Ny alika dia afaka mamofona coronavirus marina toy ny fitsapana PCR ary tsy dia lafo sy haingana noho ny fitsapana ny seranam-piaramanidina. Alika telo ao amin'ny seranam-piaramanidina Helsinki-Vantaa (HEL) amin'izao fotoana izao no mitsoka fofona an'ireo mpandeha tonga. Rehefa tonga ireo mpandeha dia asaina milahatra izy ireo amin'ilay fitsapana ary kosehina famafana ny hodiny. Ny alika dia mandalo ireo santionany ratsy nefa voasarika amin'ireo tsara. Valiny tsara? Ny mpitsangatsangana dia mahazo fitsapana CR nasal hanamarinana ny valiny. Nilaza ny lefitry ny ben'ny tanànan'i Vantaa fa ny valin'ny alika dia nampiseho ny isan-jato isan-jaton'ny fahamarinan'ny swab nentin-drazana. Ny fanandramana teo aloha dia naneho ny fahamarinan'ny 100 isan-jato hatramin'ny dimy andro talohan'ilay fitsapana PCR.
Betsaka ny resaka mifantoka amin'ny fiezahana hitazona ny mpandeha sy ny ekipa ho salama sy ho salama; na izany aza, amin'ny faran'ny andro dia miankina amin'ny mpanjifa ny mifehy ny andraikitra amin'ny fanadiovana.
Mijanona eny rehetra eny ny loza ara-pahasalamana na dia mbola tsy tonga amin'ny fiaramanidina aza izy ireo. Eritrereto ireo fotoana nanesoranao ny kiraronao, natsipy tao anaty lovia, nandehandeha teny amin'ny gorodon'ny seranam-piaramanidina tao anaty ba kiraronao. Rehefa hitanao ny kiraronao dia apetakao amin'ny ba kiraro maloto, ary angamba averinao indray. Talohan'ny COVID-10, nahasosotra ity asa ity, ankehitriny dia mety hahafaty. Hamarino tsara fa hongotanao ny Purell na hamafana sani alohan'ny handehananao any ankoatr'io faritra be fikasihan-tanana io.
Ny fotoana manaraka ho an'ny COVD-19 manaraka dia ny fiandrasana ny mpandeha amin'ny vavahady fiainganana izay ivondronan'ireo vondrona alohan'ny hidirany. Ny fikarohana dia milaza fa ny fizotry ny fiakarana, rehefa TSY mandeha ny rafitry ny rivotra ary tsy zakan'ny olona ny halaviran'ny enina metatra dia iray amin'ireo faritra mampidi-doza indrindra amin'ny fitohizan'ny dia. Mamporisika ny fliers ireo manampahaizana manokana amin'ny fitsaboana mba hanao kely araka izay tratra mba hampihena ny traikefa ananan'izy ireo sy hampihena ny fihenan-tsakafo.
Ny fahazoana ny sezanao no sakana manaraka satria ity habaka ity dia mila fanadiovana tanteraka amin'ny tasy fanadiovana. Atombohy eo an-tampon'ny seza sy ny lohan-doha, arahin'ilay ondana sy ny sisa, ny fitoeram-bokatra eo amboniny, ny latabatra ary ny efijery horonan-tsary… avy eo mipetrapetraka ary manadio ny fehin-kibo. Inona… ilay fehikibo? Aforitra tsara eo ambonin'ny seza io filàna io - saingy fotoana tokony hijerena izao: tsy voadio ny fehikibo ary mitondra fahatsiarovana ny dian-tanan'ny mpandeha farany, bakteria ary virus.
Eritrereto izao ny gorodon'ny fiaramanidina. Ny roapolo isan-jaton'ny mpandeha mitsidika ny trano fidiovana tsy misy kiraro. Mivezivezy eo amin'ny lalantsara mankany amin'ny trano fidiovana mitafy ba kiraro ve ianao? Voadinikao ve ny zava-misy fa ny ba kiraronao dia mandray izay notondrahana, nampidina, nampidinina ary nararaka tamin'ny tany? Rehefa miverina amin'ny sezanao ianao sy ny ba kiraronao, manala ny ba kiraronao sy manotra ny tongotrao ve ianao, mandoto ny tananao sy ny rantsan-tànanao?
Oh! Lozako (!) Ary Ianao
Mandritra io fialantsasatra io dia olona an-tapitrisany maro no manary ny torolàlana momba ny CDC sy ireo mpitsabo amin'ny fahasalamana, amin'ny fiezahana hamerina ny fisehoan'ny mahazatra amin'ny fiainany.
Ny mpikaroka sy ny mpahay siansa (miaina eo amin'ny tontolon'ny Eto sy Ankehitriny) dia naminavina ny fampitomboana avo roa heny ny tranga 12.4 tapitrisa coronavirus amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny fitomboana maherin'ny 20 tapitrisa amin'ny faran'ny volana janoary 2021 (University Washington ao St. Louis). Mihoatra ny aretina 3 tapitrisa no voalaza momba ny volana novambra (talohan'ny faran'ny volana), izay no be mpitatitra indrindra tao anatin'ny iray volana tamin'ity taona ity (CNN). Manakaiky ny 86,000 ny marary any amin'ny hopitaly manerana ny firenena (Tetikasa Tracking COVID) ary ny isan'ny hopitaly dia namaky firaketana nandritra ny 14 andro nisesy.
Mandra-pahatongan'ny fametrahana ny fitantanan-draharaha vaovao (Janoary 2021) dia tsy afaka mijery ny Sampan-draharahan'ny fitaterana isika raha misy mpitarika satria nandà ny FlyersRights.org fanangonan-tsonia ny fangatahana sarontava. Nanapa-kevitra ny departemanta fa tsy tompon'andraikitra amin'ny fahasalamam-bahoaka izy io, avelany eo am-baravaran'ny Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ny olana. Ny DOT dia nanapa-kevitra fa ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia manana fepetra takiana amin'ny saron-tava ary tsy tokony hisy fitsipiky ny governemanta mihoatra ny ilaina.
Ny olona mandeha mamaky an'i Etazonia sy ny seranam-piaramanidina iraisampirenena dia tsy hahita fitoviana amin'ny politikam-piarovana satria miovaova arak'asa seranam-piaramanidina sy isam-pirenena, ka miteraka fikorontanana sy fitomboan'ny fitaintainanana. Ny zotram-pitaterana an'habakabaka dia nametraka vola be tamin'ny fampielezan-kevitr'izy ireo, na dia ny fanakarama anjerimanontolo Ivy League hanome ny kopian'ny famoahan-gazety aza. Mety ho mavesatra ny fandrakofan'ny haino aman-jery; na izany aza, be ny tatitra momba ny tsy fanarahan-dalàna. Misy ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka milaza fa ny mpandeha izay tsy mety misaron-tava dia holavina ny hidirany ary hataon'izy ireo tandindomin-doza ny tombontsoany amin'ny ho avy; na izany aza, tsy ny zotram-piaramanidina rehetra no manaraka an'io fomba io. Nametraka mpandeha maro ao anaty lisitra tsy misy sidina i Delta fa ny mpandeha sasany miatrika io olana io amin'ny fanaovana sarontava mba hipetrahana ao anaty sidina, avy eo esory hisakafo / hisotro mandritra ny fotoana maharitra ary ny mpiasa misidina dia tsy afaka hampihatra ny lalàna.
Amin'ny faran'ny andro, "Caveat Emptor," avelao ny mpividy hitandrina! Raha vao mahatsapa ny loza mety hitranga ny mpandeha ary mbola manapa-kevitra ny hanidina, avy eo marary sy / na mizara ny viriosy amin'ny hafa dia andraikitr'izy ireo ary tsy tokony hitady hanome tsiny ny rafitra fitaterana an'habakabaka izy ireo.